U LIVE - स्ट्रिम, पोष्ट फोटो र भिडियोहरू सुरू गर्नुहोस्
निजी कुराकानीले हरेक मिनेटमा तपाईंलाई बढी पैसा कमाउँछ।
पञ्जीकरण लग - इन
U LIVE निर्मित फंक्शनल प्रयोग गरेर थिमेटिक स्ट्रिमहरूलाई अनुमति दिन्छ। तपाईंले क्यामेराको अगाडि के गर्ने भनेर सोच्नु पर्दैन! एक विषयवस्तु र गतिविधिहरू छनौट गर्नुहोस्, ड्रेस आउट कोडको अनुसार तपाईंको आउटफ्ट तयार गर्नुहोस् र फ्यानहरूसँग च्याट गर्दा कमाउनुहोस्। दर्शकहरूलाई तपाईंको कार्यक्रम निर्देशित गर्न दिनुहोस्।
मिठो दाँत छ? क्यामेरामा मिठाई खानको लागि सिक्काहरू पाउनुहोस्। दर्शकहरूलाई देखाउनुहोस् तपाईंको कार्ब कति मनपर्दछ!
तपाईंको मूल भाषामा विदेशीहरूलाई सन्देश पठाउनुहोस् र बिल्ट-इन स्वत: ट्रान्सलेटरले बाँकी काम गर्दछ।
न्यूनतम फिर्ता रकम १० डलर हो। केवल ePayments मा दर्ता गर्नुहोस्, एक Paypal, Payoneer, Yandex, QIWI सिर्जना गर्नुहोस् र तपाईंको पैसा कुनै पनि समय प्राप्त गर्नुहोस् - दैनिक पनि।
पञ्जीकरण अनुप्रयोग खोल्नुहोस् लग - इन